Ny nosy Vulcano any Italia dia nafindra noho ny haavon'ny entona misy poizina mahafaty
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Italia » Ny nosy Vulcano any Italia dia nafindra noho ny haavon'ny entona misy poizina mahafaty
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao farany Italia • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Ny ben'ny tanànan'i Vulcano, Marco Giorgianni, dia nandrara ny mpitsidika ivelan'ny nosy ho fitandremana.
Araka ny didy amam-pitsipika vaovao, izay nihatra androany, ny mponina ao ItaliaNy nosy Vulcano dia nomena baiko hiala amin'ny tranony isan'alina mandritra ny 30 andro manaraka, noho ny loza mety hitranga amin'ny asan'ny volkano.
Tsy maintsy mandao ny tranony ny mponina eo anelanelan'ny 11 ora alina ka hatramin'ny 6 ora maraina noho ny ahiahy momba ny entona mahafaty mivoaka avy amin'ny vava volkano La Fossa.
Araka ny voalazan'i Giorgianni, nilaina ny fepetra hentitra satria “ny tsy fahatsiarovan-tena amin'ny torimaso dia tsy hamela ny mponina hahita ny loza mety hitranga.”
Vulcano, izay ao anatin'ny vondronosy Aeolian, dia handrara ny fizahan-tany mandritra ny volana ho avy. Ny hetsika dia tonga iray volana taorian'ny nanavaozan'ny masoivoho mpiaro ny sivily ny haavon'ny fampandrenesana ho “manan-danja”, ary andro vitsy monja taorian'ny fampitandreman'ny Ivon-toerana Nasionaly momba ny Geofizika sy Volkanôlôjia ao Italia momba ny haavon'ny gazy karbonika “tsy ara-dalàna” ao amin'ny vava volkano.
Nanambara ny fisian’ny krizy ihany koa ny tompon’andraikitra ao amin’ny nosy miaraka amin’ny fametrahana ny fepetra fiarovana raha sendra misy fiakaran’ny volkano na entona mivoaka eny amin’ny rivotra.
Ny entona avoakan'ny volkano dia midika fa mety hidina ny haavon'ny oksizenina ao amin'ilay nosy, izay mety hiteraka fahasahiranana mahafaty. Ny haavon'ny gazy karbonika dia voalaza fa niakatra avy amin'ny haavo ara-dalàna 80 taonina ho eo amin'ny 480 taonina, araka ny filazan'ny mpandinika volkano. ANSA.
Ilay nosy – ny anarany dia fitambaran'ny 'volkano' sy 'Vulcan', andriamanitry ny afo romanina - dia niaina fipoahana matetika nandritra ny tantara, vao haingana tamin'ny 1888 ka hatramin'ny 1890.